बुधबार अमेरिकी डलरसहित अन्य देशको विनियमदर बढ्यो, हेर्नुहोस् कुन देशको कति ? | News Polar
बुधबार अमेरिकी डलरसहित अन्य देशको विनियमदर बढ्यो, हेर्नुहोस् कुन देशको कति ?
काठमाडौं । बुधबार अमेरिकी डलरसहित अन्य देशको विनिमयदर बढेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १६ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १६ रुपैयाँ ९३ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै जापानी यनको खरिददर १० रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १० रुपैया ६८ पैसा तोकिएको छ । कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ४२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ ४७ पैसा तोकिएको छ ।
यस्तै एक अस्ट्रेलियन डलरको खरिददर ९० रुपैयाँ १ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ९० रुपैयाँ ४७ पैसा रहेको छ । एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ६४ रुपैयाँ ४५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ६५ रुपैयाँ ३० पैसा तोकिएको छ।
एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ २ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ १८ पैसा तोकिएको छ । एक कतारी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ११ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै एक युरोको खरिददर १ सय ४१ रुपैयाँ ६२ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर १ सय ४२ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ । एक मलेसिया रिंगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ २३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ३८ पैसा तोकिएको छ ।
एक बहराइन दिनारको खरिददर ३ सय ८ रुपैयाँ ६० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय १० रुपैयाँ १९ पैसा तोकिएको छ। एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ८६ रुपैयाँ ७२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ८८ रुपैयाँ ७२ पैसा तोकिएको छ।
प्रकाशित : जेठ २६, २०७८, १२:१४:०७
आज यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर, हेर्नुहोस् कुन देशको कति ?
बिहीबार अमेरिकी डलरसहित अन्य देशको विनिमयदर बढ्यो, कुनको कति ?